Shina: Fanorisorenana ara-politika mihatra amin’ireo bilaogera mitaky ny famotsorana an’i Ilham Tohti · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Febroary 2019 8:41 GMT
Mihoatra ny 374 ireo sonia voaangona mitaky amin'ny governemanta Shinoa mba hamotsotra azy. Niharan'ny fanorisorenana sy nohadihadian'ny polisy ny sasany tamin'ireo olona nanao sonia ilay fanambarana, anisan'izany ilay mpanoratra Tibetana, Woeser sy mpanoratra Miozolomana, Ismael An.
Araka ny tatitry ny RFA, natombok'i Woeser ny fanentanana fanangonan-tsonia ary nasaina “nisotrosotro dité” niaraka tamin'ny polisy izy ary haraha-maso mafy amin'izao fotoana izao.
Iray amin'ireo mpanasonia ny fanambarana ho famotsorana an'i Iham Tohti i Ismael. Vokatr'izany, dia nandondona tao am-baravarany ny polisy teo an-toerana. Talohan'ny nialany tao an-trano handeha hisotro dite, dia namoaka ny sariny tao amin'ny bilaoginy izy ary nanoratra tamin'ny teny Anglisy momba ny “fanasana hisotrosotro dite” avy amin'ny polisy:
Soa ihany fa tsy nitazona azy ny polisy saingy nampitandremana izy mba tsy hanome fanehoan-kevitra betsaka mikasika ny resaka Xinjiang. Naneho ny fihetseham-pony izy tamin'ny alalan'ny tononkalo sinoa iray, Having tea (misotro dité), tao amin'ny lahatsorany bilaogy farany.